Masinina gilasy fantsona tsara indrindra any Shina
Tsy misy isalasalana fa ny teknolojia milina fantsom-boaloboka dia avy any Vogt USA, ary izy io no mahatonga ny milina fantsom-boaloboka tsara indrindra. Nandritra ny fotoana lava dia nanjakan'i Vogt ny tsena noho ny haitao ambony. Ny lakilen'izany haitao izany dia momba ny fanaraha-maso ny famatsian-drano amin'ny rafitra. Taorian'ny disas ...
Fikojakojana milina gilasy
Inona no tokony hojerena amin'ny fikojakojana isan'andro ny milina ranomandry, ary ireto lafiny dimy manaraka ireto dia tokony hatao tsara mandritra ny fampiasana azy: 1. Raha betsaka ny loto ao anaty rano na mafy ny kalitaon'ny rano dia hamela ambaratonga vilany fanaovana ranomandry evaporator nandritra ny fotoana ela, ary ...
Fitsipika miasa amin'ny masinin-dranomandry II
Ⅱ. Ny fanasokajiana ny rafitra Araka ny fomba famatsian-drano isan-karazany dia azo zaraina ho karazany telo izy io: ny karazana spray, ny karazana immersion ary ny karazana rano mandeha. Ny firafitry ny milina famafazana dia aseho amin'ny sary 3. Ny paompin-drano dia manaparitaka rano amin'ny evaporator ambony, ary ny fitoeran-dranomandry evaporator ...
Fitsipika miasa amin'ny masinin-dranomandry 1
Inona ny fitsipiky ny masinina ranomandry? Tombanana fa tsy hain'ny rehetra io olana io. Ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fitsipiky ny fiasa sy ny fikorianan'ny milina ranomandry amin'ny antsipiriany miaraka amin'ny sary an-tsary. Ny mpanao ranomandry dia karazana fitaovana mekanika fampangatsiahana mangatsiaka ny rano ...